Cube I7 Remix OS: Ihe ndị a bụ echiche m | Gam akporosis
Fraịdee gara aga, m webatara gị nyocha zuru ezu na nyocha nke otu n'ime mbadamba gam akporo kacha mma na enwere m obi ụtọ ịnwale n'onwe m. Mbadamba nkume bụ Cube I7 Cx Remix Os, mbadamba Android 4.4.4 Kit Kat, ọ bụ ezie na a oyi akwa nke na-achọ ịmegharị Windows 8, ekwuru eziokwu, echiche mbụ o nyere m abụghị na ọ dị ezigbo mma, yana ndị ọzọ nwere nkwarụ agbakwunyere nke enweghị ike ịgbanwe Launcher, otu n'ime isi arụmọrụ nke gam akporo na-enye anyị ma dị iche na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ maka ngwaọrụ mkpanaka.
Mgbe m mere nyocha ahụ, n’izu gara aga, ọbụlagodi na m kwenyesiri ike na m nwere ike ịpị Mbadamba ụrọ ahụ, akụkọ ahụ nke enweghị ike igbanwe ihe nkwụsị ahụ ka na-agba m ụfụ, kedu ihe ọzọ, ekwuru m ya wee kwuo dịka otu n’ime akụkụ adịghị mma. pụta ìhè nke Cube I7 Remix OS. Mgbe nyochachara nke a, ewere m mbadamba nkume wee kpebie ịpịa ya dị ka o kwere mee iji hụ ike ya zuru oke, echere m ebumnuche nke ịghara iji kọmputa nke m ma ọlị, ọbụlagodi dị ka o kwere mee na ogologo oge m nwere ike ime ọrụ site na Tablet Cube I7 CX n'onwe ya. Site na izu niile ahụmịhe ahụ maka ịchụ nta, nke m na-agaghị agagharị na komputa m otu ugboro, ana m agwa gị taa mmetụta m na mbadamba gam akporo a na-akpali akpali nke bụ ịrụ ụka adịghị m, otu n'ime nhọrọ kacha mma gbasara arụmọrụ na ogo / ọnụego.
1 A ọma version nke gam akporo sistemụ
2 Echela ọbụna maka ịgbanwe Launcher
3 Nnukwu njikwa akụ
4 Ihe mmetụta retina na-egosipụta ọbụna n’ọkụ anyanwụ na-enwu gbaa
5 Naanị batrị dị egwu na arụmọrụ
A ọma version nke gam akporo sistemụ
Ọ bụ ezie na echiche mbụ, ịhụ mbadamba gam akporo ka nwere nsụgharị nke Android Kit Kat, nke ahụ bụ Android 4.4.4 abụghị nke dị mma, anyị ga-eme ihe n'eziokwu na nke a ma hụ njikarịcha na nnukwu ọrụ ndị mmepe ahụ si Osisi os, que ejirila sistemu arụmọrụ rụọ ọrụ na nkọwapụta nke Tablet Cube I7 CX, Ekwesịrị ikwu na ọ bụ ụdị gam akporo gam akporo nke gam akporo a ga-ebu maka oge a, na ndị ọzọ na-eche maka nsogbu niile nke oriri batrị ma ọ bụ ọbụlagodi oriri RAM nke ndị ọrụ nke ngwụcha emelitere na gam akporo Lollipop na-eme mkpesa. .
N'aka nke ozo, imata nke ahu ụdị Lollipop nke Remix OS adịlarị dakọtara na mbadamba gam akporo a, ọ bụ ihe mere ị ga-eji mee ememe ma chere na udo nke uche maka emelitere ya mgbe ndị ọrụ mmepe Remix OS ma ọ bụ Cube lere ya anya. N'oge a, a na m achọsi ike maka mmelite ma nwee ụdị gam akporo kachasị ọhụrụ arụnyere, anaghị m eche echiche ime ya, nke ahụ bụ mbadamba a na-arụkwa ọrụ na Android Kit Kat nke na-adịghị echefu Lollipop ma ọlị.
Echela ọbụna maka ịgbanwe Launcher
Agbanyeghi na dika m kwurula na ubochi ya na onye ngbanye nke Cube I7 CX Remix OS enweghi ike gbanwee, n'oge a, mgbe izu abuo jiri, nke ikpeazu, ma ọ bụ na m na-atụle nhọrọ nke ịnwa ịgbanwe nke a wuru na-Launcher dị ka ọkọlọtọ, na dịka m kwuru, e mepụtara ya niile iji tụgharịa n'ụzọ zuru oke na Cube I7 CX Remix OS.
Ọ bụ eziokwu na na mbụ o siiri m ike ịmatakwu na nke ahụ bụ naanị ihe dịnụ, mana mgbe i jiri ya ma jiri ya mee ihe, ị ga-achọpụta na ihe dị mma dị mma, ugbu a, agaghị m gafere isi mgba ọkụ site na Launcher na Remix OS.
Nnukwu njikwa akụ
Banyere njikwa akụrụngwa nke Remix OS na-eme na cube I7 CX, nke bụ eziokwu bụ na enweghị m ihe ọjọọ ikwu, ihe ọzọ bụ, ha niile bụ ezigbo ihe ebe ọ bụ na agbanyeghị ọtụtụ ngwa m meghere n'otu oge, m na-agakarị rụọ ọrụ ma ọ dịkarịa ala taabụ atọ ma ọ bụ anọ nke Google Chrome, gbakwunye Gmail ma ọ bụ ngwa mbata, ngwa Hangouts, Skype, Es File Explorer, Twitter na Facebook niile a Rolling n'ụzọ zuru oke na ndabere na ahụtụbeghị m ọ bụla slowdown ma ọ bụ lag ma ọ bụ malfunction nke ihe ọ bụlaIhe ọzọ bụ na RAM agabigabeghị karịa 1,65 Gb nke ebe nchekwa nwere, si otú a na-ahapụ ihe karịrị 600 Mb nke RAM n'efu ka na-agba ọsọ karịa ngwa na ndabere.
Ihe mmetụta retina na-egosipụta ọbụna n’ọkụ anyanwụ na-enwu gbaa
Ihuenyo nke Cube I7 CX Remix Os bụ otu n'ime ike nke a na-akpali akpali Android Tablet, nke a nwere ike hụrụ ozugbo site na iji Tablet n'èzí na-enwu gbaa ìhè anyanwụ. otu mbadamba ihe omuma nke ihe omuma ya na ihe omuma nke ndi mmadu emeela ka m kwenye.
Naanị batrị dị egwu na arụmọrụ
Banyere batrị nke ọnụ, dị ka ị hụrụ na vidiyo na elu nke isiokwu a ebe m na-etinye nseta ihuenyo nke m na-egosi gị 14 awa na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ọrụ, n’enweghi obi abua bu ọzọ nke ike nke Cube I7 CX Remix OS.
Banyere arụmọrụ na ogo nke Intel Atom processor ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha, ihe nhazi nke n’adighi aru oku n’agbanyeghi udiri okpete i nyere ya, ọbụna na-agba ọsọ ụbọchị niile na oke ọkụ a na-agba Spain na ọ nweghịzi onye maara ebe ọ ga-abanye.
N'ikpeazụ, nkwubi okwu ikpeazụ m bụ na anyị nwere n'ihu anyị a na-akpali akpali gam akporo Tablet nke nwere ihe ọ bụla anyaụfụ na ndị ọzọ mbadamba na ọbụna Mmaji Ọ na price. mbadamba gam akporo nke nwere ihe nlere anya na ntaneti FullHD, ihe nlere Quad Core processor 2 GB nke RAM karia igha maka ihe oru Kit Kat na Remix OS.
N'ihi ya, m nwere ike na-agwa gị na ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo gam akporo Tablet, lekwasịrị anya na arụpụtaghị na na a karịa gbanwee price, na-echeta na Mbadamba naanị ọ na-efu ihe karịrị euro 150 na set nke Tablet ọzọ keyboard ọ dị ntakịrị n'okpuru 200 euro, La Mbadamba Mbadamba I7 CX Remix Os Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nhọrọ nzụta dị ezigbo mma iji tinye n'ime akaụntụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Cube I7 Remix OS: Ihe ndị a bụ echiche m mgbe izu abụọ gachara iji Tablet mee ihe
Ọ dị ka ezigbo mma, n'ezie. Otu ajụjụ… enweghị «Ñ» na keyboard, olee otú ị ga-esi dozie ya?
Idebe kiiboodu na Spanish na Spain site na ntọala mbadamba nkume ị gha inwe ihe odide nile nke Spanish na ebe mbu oburu na Ñ ma obu Ç aputaghi na keyboard.
Ehe, echere m ya. Eziokwu bụ na ọ dị oke mma dịka otu nke abụọ 😉
Obi abụọ ahụ nwere leta Ñ, eziokwu bụ na m dị ka mbadamba a, Windows anaghị amasị m nke ukwuu, abụ m onye na-akwado gam akporo, ihe ọzọ ị nwere ike ijikọ onye nbipute ibipụta, m na-ekwu ya maka chrome mere enweghị nhọrọ ahụ na remix os Ee?
You nwere ike inyere m aka? Enwetara m Cube I7 Remix ma ọ daa na-ele multimedia, ya bụ, ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke iji ya, mana iji lelee vidiyo, ka ọ bụ usoro, pelisdroid, mitele, atresplayer, youtube ma ọ bụ ihe nkiri sitere na USB site na otg ma ọ bụ site na nchekwa dị n'ime ( na mx ọkpụkpọ ọ na-eme, na vlc ọ na-arụ ọrụ nke ọma site na USB ma ọ bụ ebe nchekwa dị n'ime), ọ na-agba ọsọ, ọdịyo ahụ dị ntakịrị ma amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu nke m karịsịa ma ọ bụ na ọ bụ nke ihe nlereanya a n'ozuzu. Ọ bụrụ na ịlele multimedia maka ihe karịrị nkeji 40 anaghị ada gị, aga m azụta ụlọ ahịa ọzọ na ụlọ ahịa ọzọ wee si otú a jiri ikpe ahụ, iko dị ọkụ na keyboard (ọ na-adakarị m mgbe ọ na-ekpo ọkụ, na mgbe ụfọdụ mgbe ọ dị naanị tụgharịrị kwa), ma ọ bụrụ na ọ dakwara gị, m ga-eweghachi ya wee zụta ụdị ọzọ… Ekele gị !!
N’ỌP SP Spanish, ọ gaghị ekwe omume iji tebụl ahụ mee ihe
Ọ dị ịtụnanya na isiokwu a dị ka mgbasa ozi gbanwere ...
Ugbu a mbadamba enweghị ike iji na Spanish, ọ gaghị ekwe omume na-agụ ebe ọ na-ekewa akwụkwọ ozi na okwu ndị nwere accents T .Enwere ọtụtụ nsogbu na Tablet Cube I7 Remix. Nke mbu bu na o nwebeghi asusu Spanish (nani Chinese na Bekee)… Nke abuo bu na leta adighi egosi na saiti obula mgbe ichoro intaneti, google play wdg ………………………. (pinky vs pinky)… Nke atọ bụ na ọ bụrụ na okwu nwere ngwoolu, leta na ngwoolu a na-ekewapụ ya na nke gara aga na nke na-esote (nke ọma na nke ọma) .. (bidoro nke anyị bidoro). M Kpeghachi, na Spanish ọ gaghị ekwe omume iji tebụl.
N'iburu n'uche nnukwu oriri nke ngwaahịa elektrọnik na Spain ma e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ, echegbula onwe gị banyere itinye OS na Spanish na idozi nsogbu ndị a. Enwere m egwu na agaghị ere ọtụtụ ebe a ...
Nke ahụ abụghị ya bụ enyi, enwere m Mbadamba ụrọ maka ihe karịrị ọnwa abụọ ma m na-ejikarị ya eme ihe, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na n'ụkpụrụ ahụ, anaghị arụ ọrụ keyboard n'asụsụ Spanish mana a na-edozi ya site na ntọala keyboard na menu nke Mbadamba ụrọ. ntọala NKWA nwere asụsụ Spanish, M Kpegharịa: Ee ọ nwere asụsụ Spanish.
N'aka nke ọzọ, ọ na-eweta Ñ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịzụrụ keyboard magnet ọ na-abịa na nhazi dị iche iche nke igodo Spanish, nke m doziri site na nzụta dị mfe nke akwụkwọ mmado keyboard nke na-efu m euro dị ụkọ. Banyere ụda olu, ihe ị na-ekwu na ụfọdụ ngwa bụ eziokwu mana nke ahụ bụ nsogbu na sistemụ arụmọrụ RemiXOS ọ na-eme naanị na ụfọdụ ngwa, dịka ọmụmaatụ na ihe nchọgharị Google Chrome Beta na nkịtị Google Chorme anaghị eme, dịka ọmụmaatụ ya na akwukwo ihe edeturu agba ederede adighi eme, dika imaatu na akwukwo Google adighi eme kwa, obu ezie na dika i na-ekwu na o bu eziokwu na o na aputa na ufodu ngwa, o bu ihe na acho ngwa ndi nke a adighi emetuta site na ngwoolu.
N'aka nke ọzọ, Mbadamba ụrọ bụ ezigbo kukumba, na elu nke Mbadamba nke 400 euro ma ọ bụ karịa na ndị ọzọ magburu onwe ya magnetik keyboard. Amaghị m ebe enyi gị zụtara ya, mana ọ bụrụ na ọ bịakwutere gị na Chinese na-enweghị ohere nke ịgbalite Spanish, aga m akpọtụrụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma mepee nkwupụta.
Azụtara m mbadamba nkume ahụ ma ọ bịara n'asụsụ Chinese, olee otu m ga-esi gbanwee ya?
Aghọtaghị m ihe ọ bụla ma ọ ga-amasị m ka ịmepụtara nkuzi
mbadamba ihe di egwu. ma enwere m obi abụọ… .. nke mbụ bụ na ihe oyiyi anaghị agbagharị mgbe ihuenyo na-agbagharị ,,, na nke abụọ bụ na na nhazi ngalaba, mgbe m pịa UPDATE, ọ na-aga ozugbo na isi menu ,, ,, onye ma ihe n’eme ????
Zaghachi jose miguel romero crespillo
Ngwa dị mkpa maka mbadamba gam akporo: Taa CudaSign ka ị banye na digitally ma dejupụta akwụkwọ